नेकपाकै नेताले वामदेवलाई हलेदो भनेपछि प्रतिवादमा उत्रिए समर्थक, सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोप – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज २५, २०७५१३:०६0
काठमाडौं, २५ असोज । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वामदेव गौतम काठमाडौं ७ बाट उपनिर्वाचन लड्ने नलड्ने, त्यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने नहुने, रामवीर मानन्धरको राजीनामा स्वीकृत गर्ने नगर्ने कुनै निश्चित नभए पनि यस घटनाले नेकपाभित्र तिक्तता ल्याउन भने सफल भएको छ । यस प्रकरणले नेकपाका नेता कार्यकर्ताका साथै शुभचिन्तक दुई ध्रुवमा विभक्त भएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, वामदेव समर्थक र विरोधी खेमाका पत्रकार नै खुलेर सामाजिक सञ्जालमा बहसमा उत्रिएका छन् । केहीले विभिन्न आरोप लगाएका छन् भने समर्थकले प्रतिवाद गरेका छन् । सांसद मानन्धरले वामदेवका लागि राजीनामा दिएलगत्तै वामपन्थी पत्रकार बाबुराम ढकालले फेसबुकमा एउटा लामो स्टाटस लेखे । जसको शीर्षक रहेको छ, वामदेवको छटपटी, सुन तस्करी र नेकपाको निर्णय ।
आलेखमा वामदेव गौतम संसदमा नहुँदा कुन चाहिँ आकाश खस्छ ? त्यसको जवाफ माग भन्दै नेकपाका नेता कार्यकर्ताले खबरदारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले वामदेवलाई सुन तस्करी गरेर नेकपालाई सबैभन्दा बढी बदनाम गराउने खलपात्र भएको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘त्यस्ता नेतालाई संसदमा पुर्याउने कुत्सित मनशायबाट गरिने नेकपाको सम्भावित निर्णय देश, पार्टी, कार्यकर्ता समर्थक र मतदातामाथिको सबैभन्दा ठूलो घात हो,’ पत्रकार ढकालले लेखेका छन् ।
यस्तै, पत्रकार तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले वामदेवलाई हलेदोको संज्ञा दिएका छन् । वामदेव हलेदो भएको र पहेंलो रंगका लागि अरुले औचित्यबमोजिम मिसाउने पात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।‘हलेदो भनेर चिनेपछि किन बोक्रा कोट्याइरहनु ? हलेदो आफैं तरकारी हुने होइन, पहेंलो रंगका लागि अरुले मिसाउने न हो औचित्यबमोजिम… । यसो हुनाले इच्छुकहरूले चाहे जसरी प्रयोग गरे भइहाल्यो । विकासको मूल फुटे फुटाएको हेर्न प्युठान र बर्दियाको भ्रमणमा जानेहरूले देखिहाल्छन्, धेरै झुटमुठ गर्न आवश्यक छैन । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर । ध्वनि प्रदूषण,’ नेता थापाले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
थापाले वामदेवविरुद्ध स्टाटस लेखेपछि पत्रकार विश्वमणि सुवेदीले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । प्रत्युत्तरमा सुवेदीले थापालाई टपरटुँइयाँको संज्ञा दिएका छन् ।‘पार्टी अफिसमा जागिर खाएको भरमा ‘नेता’ बनेको एउटा टपरटुँइयाँले बर्दियादेखि प्युठानसम्मको विकासको ठेक्का लिएर वामदेवको बद्ख्वाइँ गर्दैछ । पार्टीको सदस्यता च्यापेर पार्टीका नेताविरुद्ध बोल्न, लेख्न पाइने कि नपाइने ? यस्ता अराजकता हामीले कति दिन टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने ? प्युठानमा वामदेवले चुनाव जितेपछि भएका कामका नमुना यिनै कागजले बोल्छन् । टपरटुँइयाँहरुको पछाडि प्युठानी जनता पक्कै नलाग्लान्,’ सुवेदीले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
पत्रकार हुँदै नेकपाको केन्द्रीय सदस्य बनेका थापालाई प्युठानबाट चुनाव लड्न खोज्दा वामदेवले नै उनको नाम काटेका थिए । वामदेवले केन्द्रबाट दबाब दिएर उनको नाम उम्मेदवारमा सिफारिस नगर्न भनेका थिए । त्यसपछि नै सूर्य थापा वामदेवविरुद्ध लागेका हुन् ।